AKHRISO: Xildhibaanada mooshinka ka gudbiyay madaxweyne Farmaajo oo cadaadis lagu saarayo iney ka laabtaan | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA AKHRISO: Xildhibaanada mooshinka ka gudbiyay madaxweyne Farmaajo oo cadaadis lagu saarayo iney...
AKHRISO: Xildhibaanada mooshinka ka gudbiyay madaxweyne Farmaajo oo cadaadis lagu saarayo iney ka laabtaan
Rugta Ganacsiga iyo Warshaddaha Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin waxyaabaha kusoo kordhay xaalada Siyaasadeed ee dalka ee ah mooshinka laga gudbiyay Madaxweyne Farmaajo.
Warsaxaafadeed ay soo saareen Rugta Ganacsiga iyo Warshaddaha Soomaaliyeed ayaa waxa ay ku sheegeen in xaalada soo korortay ay saameyn ku yaalan karto dhaqaalaha, maalgashiga iyo guud ahaan nolosha danyarta.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo Xildhibaanada keenay mooshinka ayay ugi baaqeen inay ka laabtaan.
Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliyeed waxay aad iyo aad uga walaacsan tahay xaaladda siyaasadeed ee ku soo korortay dalka, taasi oo ugu horrayn saamayn wayn ku yeelan karta dhaqaalaha, maalgashiga iyo guud ahaan nolosha danyarta.
Waxaynu wada ognahay haddii la waayo xassilooni siyaasadeed in wax walba xumaanayaan, kalsoonida guud iyo aaminaadda maalgashi dibadeed oo dalka ka hirgashaana meesha ka baxayso.
Waxay noola muuqataa in arrimahan deg-degga ku socda dalka gelin karaan, gaarsiinna karaan meel aad u liidata, rajada dib u soo kabashada dalkana ay ku keeni karto dhaawac aan kabasha lahayn.
Sidaa awgeed, Waxaan usoo jeedinaynaa Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo Xildhibaannada keenay mooshinka ka dhanka ah Madaxweynaha in ay ka noqdaan tallaabadan, maaddama ay wax u dhimeyso horumarka iyo geeddi socodka siyaasadeed ee dalka.
Waxaan ku talinaynnaa in dhammaan qaybaha ay khusaysa ee xilalka kala duwan haya inay u turaan umaddaan muddada dheer dhibaatada ku soo jirtay, muujiyaana dulqaad iyo isu tanaasul, si dalku u gaaro meel ka wanaagsan meesha hadda la joogo.